अराजकताको पराकाष्टा | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
October 7, 2018 Dishanirdesh Kanchan0Comments
संविधान ऐन कानून नियम किन चाहिन्छन् ? राज्य संचालन व्यवस्थित शासनतन्त्र सामाजिक नैतिक मुल्यहरुको रक्षाका लागि अनादिकाल देखि विभिन्न स्वरुपमा नीति नियम अनिवार्य रहदै आएका छन् । राज्य व्यवस्था किन र कसरी उत्पत्ति भयो ? वर्तमान नेपाली सन्दर्भमा यो विषय अत्यन्त मननीय बन्न पुगेको छ । व्यवस्थित समाज, शान्तिपुर्ण सह अस्तित्व आततायी बाहुबलीहरुबाट युक्ति सुखी समृद्ध राष्ट्रका लागि विश्वशनीय शासक अनिवार्य हुन्छ यसको अभावमा तानाशाहीको खतरा सदैव बनि रहन्छ ।
सुखी समृद्ध नेपालको नारा दिएर दुई तिहाई बहुमत प्राप्त अहिलेको सरकारबाट आम सर्वसाधारणले ठूलो आशा भरोसा राखेका हौं । यस्तो लाग्छ यो सब धराशायी हुँदै गएको छ । नारा भाषण र कागजमा मात्र रहेछन् । यो सब राजनीतिलाई व्यवसायिक बनाई रहेका चतुर चालवाज व्यक्तिहरुले महानायकको खोलबाट जनता झुक्याउने धूर्तता गरेछन् भनि एकपछि अर्को घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आएको छ । मूल कानून संविधान मान्दैनौं भनि जलाउनेहरु ब्ल्याक आउट गर्ने र दिपावली गर्नेहरुको वर्ग सिमित देखियो हामी आम नागरिकहरुसँग तिनको कुनै सरोकार प्रयोजन रोकिएन । वर्ग विभाजनको स्पष्ट रेखा यी शाशक कथित नेता र हाम्रा बीचमा स्पष्टसँग कोरिएको देखिदैछ । ऐन नियम संविधान यिनै धू्रर्तहरुको सुविधाका लागि बनेको देखियो । सत्ता वा विपक्षमा जहाँ भए पनि पालो कुनै मात्र गतिविधि देखिए । लूट खसोट ब्रहमलुट यी सबको अभिष्ट उल्टै विन्दुमा टुंगिन्छ त्यसैले कुनै अन्तरद्वन्द जस्तो देखिए पनि खान पाई रहेका र पर्खाइमा रहेकाहरु बीचमा मात्र हो । बस्तुतः दुई तिहाई जनमत बाच्नका लागि अस्तित्वका लागि जुझी रहेका छौं । यो भ्रममा नपरे हुन्छ । कुनै दल विशेषलाई हामी आम सर्वसाधारणले कलेजोमा नै राखेको होला । कसले के गर्छ भनि समय समयमा प्रयोग भई
रहेका दृश्य हाम्रा अगाडी छन । त्यसैले लोकप्रिय नेता भन्ने शब्द नै हराई सक्यो यी प्रहसनका नायककारहरुबाट अराजकताको अन्त हुन असम्भव छ । त्यस्तो चाहना नै देखिएन । यिनीहरुका हांक भन्दा त आध्यात्मिक पात्र “घुईतडीका शेड्या” को हाँक प्रहसन प्रतिस्पर्धामा वेगवान लाग्दछ ।
माननीय गृहमन्त्रीज्यूले सुन काण्डका ठूला माछा समाति छाड्ने, सिण्डिकेट तोड्ने अराजकताको अन्त गर्ने लगायतका बाँचा गर्नु भएको थियो ठेकेदारहरुका भ्रष्ट क्रियाकलाप समाप्त पार्न पक्राउ पुर्जी समेत जारी गर्ने तरखर देखाउन भएको थियो केही महिना अगाडीका ती सक्रियताको परिणाम हेर्दा यातायात व्यवसायीहरु खतरनाक शक्तिशाली बनि सके सुककाण्ड सनम हत्यामा शंलग्न कतिपय व्यक्तिहरु जेल मुक्त मात्र भएनन् पुनरबहाली भएर चमकदार बनि सके । ठूला माछा त तलाउमा हराई सके । लुटेरा व्यवसायी त सम्मानित व्यत्तित्वमा रुपान्तरित भइ सके । जगत विश्यात पप्पु कन्सट्रक्सन अजेय दानव जस्तै बलशाली भएर गर्वका साथ अन्तर वार्ता दिदै गरेका दृष्य सामान्य बनि सके । दिगम्बर झा अयोग्य असक्षम भनि फालिएका त टेलिकम लगायतका भाग्यविधाताका रुपमा असीन भई सके अरबौंका मालिक चुडामणी शर्मा समानका साथ गर्जना गर्छन । सुनवाई समितिबाट अस्वीकृत प्राणी त धमाधम सम्मानित इजलाशका नियन्त भईसके । नारा जुलुस तोडफोड बन्द, हड्ताल बेगवान गतिले बढ्दै गएका छन् । राज्य या त छदै छैन या मुर्छामा छ । अपराध संहिता बनाएर एनजीओहरुलाई सेमिनारका “चानस” उपलब्ध गराए पनि व्यवहारमा काम लाग्दैन । गोविन्द केसीसँग सम्झौता गर्छ, कार्यान्वयन गर्ने बेला त शासन लुप्त हुन्छ । एपार्टमेन्ट हस्पिटल हुन सक्तैन भनि राज्यको संयन्त्र रिपोर्टिङ्ग गर्छ, त्यसलाई लब्याईन्छ । जुम्लाको मार्सिभात खाएका दृश्य सञ्चार माध्यमहरुमा आउछन्, लगत्तै असंभव पनि संभव हुन्छ सुकिला गाडी लुगा लगाई खवाई “गाट” शासन छदैछ पदवी भए नभए पनि फरक पर्दैन । राज्यकोष तिनकै लागि हो हाम्रो नसीवमा त खाडी देशको रेगीस्तान नै शरणस्थल छ । अव ब्वाँसाहरुमा पनि खान पाउने र नपाउनेको बीच द्वन्द प्रारम्भ भई सकेको छ । पटाक्षेप भएपछि अराजकताको पराकाण्टा हुनेछ । क्रमशः
← के जनताको साझा सम्पत्ति लूटको खजाना हो ?
प्रतिशोधले देश बर्बाद हुन्छ →